Vaovao - Inona avy ireo soritr'aretina voan'ny virus coronavirus vaovao (COVID-19)?
Inona avy ireo soritr'aretina voan'ny virus coronavirus vaovao (COVID-19)?
Tsy mitovy ny fihetsika ataon'ny olona aorian'ny voan'ny virus coronavirus vaovao:
Ny sasany dia voan'ny aretina asymptomatika. Tsy manana fahasahiranana miharihary izy ireo, ary nahita fa tsara rehefa nanao fitsapana asidra niokleika izy ireo. Ny sasany marary mora. Tamin'ny voalohany dia mahatsapa tsy mahazo aina amin'ny tenda, maina na tenda ny tenda, mievina, mikatona ny orona, orona mandriaka, ary manohy mamelona, ​​mikohaka, mankarary tratra, sns. Ny maripanan'ny vatana dia miakatra hatrany amin'ny ambaratonga samihafa, marary ny vatana, reraka, marary andoha, tsy fihinanan-kanina ary soritr'aretina hafa .
Ny asymptomatika dia mety hivadika ho marary. Ny ankamaroan'ny marary maivana dia nihatsara sy nivoaka taorian'ny fitsaboana. Ny toe-pahasalaman'ny olona sasany dia miharatsy noho ny aretina mafy: ny soritr'aretina etsy ambony dia miharatsy hatrany, ny tazo mahery, ny havizanana, ny hypoxia, sns. Ny tahotra ny aretina vaovao coronavirus dia ny fahafatesan'ny marary marary mafy.
Ka, ahoana ny fomba hisorohana ny coronavirus vaovao? Mba hisorohana io otrikaretina viriosy io dia ilaina ny misoroka ny fifindran'ny tsiranon'ny taovam-pisefoana, maka fiarovana, manao sarontava sy satroka. Ny fifandraisana amin'ireo marary voamarina dia mila mitafy akanjo miaro, solomaso, sns. Ny fitantanana ny tsiambaratelo ihany no afaka manatratra ny tanjon'ny fisorohana.
Misy fomba maro hisorohana ny coronavirus vaovao.
Voalohany indrindra, tsy maintsy manao asa tsara ianao amin'ny fanokanan-trano. Amin'ity fotoana ity dia azo antoka kokoa ny mampihena ny fivoahana. Raha mila mivoaka ianao dia tsy maintsy miaro tena, manao sarontava ary manasa tanana matetika. Tsy afaka manosotra ny masonao amin'ny tananao ianao na hikasika ny tavanao any ivelany. Amin'izao fotoana izao dia azonao atao ny mampiasa sarontava fitsaboana na saron-tava N95 ho fisorohana tsara kokoa. Ankoatr'izay, ny loharanon'ny aretina dia tsy maintsy fehezina mafy, ary ny marary voamarina, ny olona ahiahiana ary ny olona akaiky azy dia tsy maintsy atokana mba hijerena na hanaovana fitsaboana. Ankoatr'izay, ny biby dia dia mila fehezina mafy, ary tsy tokony hisy mihitsy ny lalao fihinanana. Manaraka izany, aza mifandray akaiky amin'ireo marary soritr'aretin'ny taovam-pisefoana, aza mankany amin'ny toerana be olona, ​​ary tsara kokoa ny mifantoka amin'ny rivotra matetika ao anaty trano.
Ireo fomba etsy ambony dia ho an'ny referansa ihany. Tokony hanantona dokotera matihanina any amin'ny hopitaly ianao amin'ny fizahana manokana sy fepetra fitsaboana.